चितवनका यूवाहरु डा. केसीको समर्थनमा सडकमा ओर्लिए – Saurahaonline.com
चितवनका यूवाहरु डा. केसीको समर्थनमा सडकमा ओर्लिए
चितवन, ०८ साउन । आमरण अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीको माग र अभियानमा समर्थन जनाउदै भरतपुरमा सा“झ यूवाहरुको समुहले ¥याली निकालेको छ । दारी ग्याङ चितवन र ब्रदर्श नेपालको संयुक्त आयोजनमा ¥याली निकालिएको थियो ।
¥याली पुल्चोकदेखि चौविसकोठीसम्म पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । ¥यालीमा चिकित्सक, समाजसेवी, विद्यार्थीको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियातन्त्र अन्त्य गर, डा। गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर’ भन्ने नारासहिको व्यानर सहित सडकमा उत्रिएका थिए । ¥याली सहभागि यूवाहरुले डा। केसीको मागहरु पूरा गर्न दबाव दिए ।
समाजिक कार्यमा यूवाहरुको हातेमालो गर्ने गरि गठन भएको दारी ग्याङ चितवनले चाडैनै अन्य समाजिक चासोका सरोकारमा सहभागिता जनाउने बताएको छ । कोणसभामा नेपाल चिकित्सक संघ चितवनका सहसचिव डा। भोजराज अधिकारीले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा। केसीका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । “स्थानीयतहमा समर्थनमा ¥याली, अन्र्तक्रिया हुनेक्रम बढेको छ”, उनले भने,“चितवनमा यूवाहरुले निकालेको ¥यालीले यूवा एकता झल्काएको छ ।”
उनले यूवाहरुले खुलेर गरेको समर्थनको प्रशंसा गरे ।“ विगतमा समर्थन जनाएका चिकित्सकहरु अझै खुलेर आउन सकेका छैनन्”, उनले भने,“यूवाहरुको यो समर्थनले चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत जमातलाई पनि सकारात्मक बन्न सन्देश दिनेछ ।”
स्थानीय शान्ति समिति चितवनका संयोजक बद्री तिमिल्सिेनाले जायज मागहरु सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । केहिदिन अघि मात्रै चितवनमा गठन भएको दारी ग्याङले उपचारत विरामीलाई ताजा रगत उपलब्ध गराउन तत्काल रक्तदाताहरु खोजी गरि सघाउने गर्दै आएको छ ।